Ndinotanga sei evanhu vezvenhau? Uyu mubvunzo wandinoramba ndichiwana kana ndichitaura pamhedzisiro yemagariro enhau pane bhizinesi 'kushambadzira kushambadzira. Kutanga, ngatikurukurei kuti sei kambani yako ingade kuve inoshingairira pasocial media.
Zvikonzero Nei Mabhizinesi Achishandisa Yemagariro Media Kushambadzira
Heino rakakura rinotsanangudza vhidhiyo munzira 7 nzira iyo yako yemagariro kushambadzira inogona kutyaira mhedzisiro yebhizinesi.
Ungatanga Sei NeMagariro Media
Sarudza Yako Yemagariro Networks - Tarisa akasarudzika maindasitiri mapoka uye vatengi pakati pesocial media platform Ini handisi fan yekungosarudza imwe nekuregeredza imwe. Ini ndinotenda iwe unogona kutora chikamu pamapuratifomu ese - asi tarisa uye tarisa panowana mikana inotanga kumuka. Izvo hazvisi zvese nezve huwandu hwevanhu pane iyo infographic.
Zadza Ma profiles ako - Kana ini ndikaona generic profile foto, yekushaikwa kumashure, kana isina kukwana chimiro, ndinogara ndichizeza kutevera kana kuita nekambani kana munhu pasocial media. Tora nguva yako kumisikidza uye nekupa yakasarudzika, asi yakajeka profil iyo inotaurirana chinangwa chako chekuve uripo.
Tsvaga Izwi Rako neToni - Kuenderana kweBrand kwakakosha online, saka ita shuwa kuti iwe unogadzira toni inoenderana paunenge uchigovana nekupindura pasocial media. Ramba uchifunga kuti inyika yakabatikana, ine ruzha kunze uko, usave unofinha!
Sanganisa Zviratidzo - Mifananidzo nemavhidhiyo zvinokanganisa kubatanidzwa uye kugovaniswa kwako enhau midhiya kunovandudzwa zvakanyanya. Tora mapikicha, sanganisira vhidhiyo, ronga mamwe chaiwo-enguva mavhidhiyo zvikamu, uye ugovana mamwe mavhidhiyo mapfupi mune zvepamhepo nyaya kuti unyatso shandisa yega yega chikuva iwe chaunoda kuita.
Sarudza Yako Yokutumira Strategic - Ichangoburwa, kazhinji, uye inoenderana ndiwo matatu mazwi atakatsidzira kwemakore gumi apfuura nevatengi vedu uye ticharamba tichisundira kwemakore gumi anotevera. Kupa kukosha kune vateveri vako kwakakosha! Ini handisi fan of any ratios for share, share kana ichinge yakakosha kune vateereri vako kana nharaunda.
Gadzira Cadence - Vateveri vako nevateveri vanouya kuzotarisira zvichangoburwa uye zvinowanzo gadziridzwa kubva kwauri Zvemagariro midhiya inowanzo kuve mutambo wekusimudzira sezvo zvemukati zvikagovaniswa uye zvichikosheswa. Usaore moyo pakutanga uine zvidiki zvinotevera uye zvidiki zvikamu ... ramba uchishanda pazviri uye usakanda mapfumo pasi! Kana iwe ukamira - nekuda kwechikonzero chero chipi - iwe unowanzo gamuchira rakakosha donho raunofanirwa kukunda zvakare.
Ronga Yako Yemagariro Karenda - Iko kune mwaka kune rako bhizinesi? Pane here akakodzera manhamba aunogona kudzosera kumashure uye kuronga mune ako enhau midhiya profiles? Unogona here kusarudza chinyorwa chaunogona kutaura nezvacho mwedzi wega wega kana kunyangwe vhiki rega rega online? Kuronga yako yemagariro khalendari inzira huru yekukura yako yemagariro midhiya masimba, uye iyo inokutendera iwe kuseka ramangwana uye kuyeuchidza vanhu vekare kuti vagare newe.
Usakanganwa Kudanwa Kuti Uite - Mutemo wa gara uchitengesa haishande neSocial Media… asi gara uchizivag anoita! Chinangwa chako chinofanirwa kuve chekuzivisa uye nekupa kukosha kune yako network. Nguva imwe neimwe mune imwe nguva, vayeuchidze zvavanogona kuita zvinotevera kusangana newe nezvako uye masevhisi. Sanganisira Kufona-Ku-Kuita mune yako yemagariro mbiri, inzira huru yekungo teedzera mamwe mabhizinesi.
Dai ndaidzidzisa a Yemagariro Media Kushambadzira 101 kirasi, ini ndaizowedzera mashoma makiyi mazano aripo kubva kune ino infographic:
Mukurumbira Kuongorora - Uchishandisa chakakura pasocial media yekutarisa chishandiso, iwe unofanirwa kunge uchiteerera kune chero kutaurwa kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana vanhu. Yechokwadi-nguva yambiro uye nekukurumidza mhinduro uye resolution zvakafanira.
Zvemagariro Ehungwaru - Kutaurirana pane vezvenhau kupa hupfumi hwemashoko idzo kambani yako inofanira kunge ichiteerera. Prospect mibvunzo, mhinduro yevatengi, uye ruzivo rwekufambisa runogona kupa ruzivo rwakakosha kune rako bhizinesi kuti uite pane.
Mabatiro evatengi - Zvino, kupfuura nakare kose, vatengi nemabhizinesi zvakafanana vari kutarisira kuti makambani apindure kune zvavanokumbira vatengi kuburikidza nenzira dzemagariro. Sezvo vezvenhau iri foramu yeruzhinji, iwo mukana unoshamisa wemabhizinesi kuratidzira kugona kwavo kuunza gadziriso kumatambudziko ebasa revatengi uko vamwe vanozozviona sechinhu.
Gadza Zvinangwa uye Monitor Performance - Mabasa akadai seanotevera, kubatanidzwa, manzwiro, uye kugovana zvirikutungamira zviratidzo izvo zvine maitiro anofanira kuongororwa. Zvemagariro venhau vanogona kutyaira kuziva uye kuziva kunogona kutyaira chiremera uye kuvimba. Chiremera uye kuvimba kunogona kukanganisa injini yekutsvaga. Uye, hongu, zvese izvi zvinogona kutyaira mhedzisiro yebhizinesi sekuchengetedza, kutora uye kuwedzera kukosha kwevatengi.
Iyi infographic kubva Venngage inofamba bhizinesi kuburikidza nekumisikidza uye kuvandudza yavo zano rekushambadzira kuburikidza nesocial media. Uye kune mamwe matipi akanaka mukati umu kune akasimbiswa mushambadzi futi!
Tags: Mabatiro evatengikutangamukurumbira manejimendimukurumbira kuongororamanzwirohuchenjeri hwemagariroevanhu vezvenhaupasocial media kuwanamagariro enhaumagariro enhau mashandirokuchengetedzwa kwemagariro enhauzvemagariro vezvenhau zanotanga pasocial mediamutsiva